China Kurodha uye kuburitsa robhoti Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
HY1010B-140 ndeimwe yeakanyanya compact 4 Axis inobata robhoti, yaigara ichishandiswa kugadzira, kunyanya kurodha nekuburitsa, kutsika, kutora uye nzvimbo nezvimwe.
HY-1010B-140 Robot irobhoti rekurodha uye rekuburitsa, iro rinonyanya kushandiswa kugadzira unit uye otomatiki yekugadzira mutsara wekugadzirisa isina chinhu kudya, kugadzirisa pakati pe workpiece blanking, maturusi emuchina uye muchina chishandiso chekushandura mabatiro ekubata uye workpiece turnover, lathe, kugaya, kugaya, kuchera uye mamwe simbi yekucheka muchina maturusi uye otomatiki kugadzirisa.Marobhoti anowana inoshanda otomatiki kurodha uye kuburitsa sisitimu kuburikidza neotomatiki yekudyisa silo, conveyor bhandi.
Industrial robhoti kurodha uye kurodha inogona kushandiswa kugadzira lathe, senge CNC lathe, machining centre, punch etc. Inogonawo kushandiswa kutora zvinhu, kudyisa, kuunganidza uye zvichingodaro.Mukuita, iyo otomatiki yekurodha uye yekuburitsa muchina unogona kunge uchishandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemaindasitiri.Iine zvakanakira kushanda kwakaringana, kushanda kwepamusoro uye hukuru hwebasa.
Kuisa uye kuburitsa basa reLaser yekucheka muchina
4 Axis inobata robhoti 10kg payload.
Kurodha nekuturunura zvekudhinda Machine
Aluminium cup kudzvanya.
Kurodha uye kurodha kune smart Kitchen
Maturusi ekicheni achidzvanya
Wese mutengi anofanira kuziva YOOHEART robhoti yakanaka vasati vatenga.Kana vatengi vaine imwe YOOHEART robhoti, mushandi wavo achave ne3-5 mazuva emahara kudzidziswa muYunhua fekitori.Pachave neboka reWechat kana WhatsApp group, ma technician edu anotarisira mushure mekutengesa service, magetsi, hard ware, software, nezvimwe, zvichave mukati. Kana dambudziko rimwechete rikaitika kaviri, nyanzvi yedu inoenda kukambani yevatengi kunogadzirisa dambudziko. .
Q1.Izvi zvakachengeteka kuvashandi here?
A. chokwadi, chimwe chezvakanakira kushandisa robhoti pakunhonga nenzvimbo kuchengetedza vashandi kubva mukukuvadzwa.Mumwe mushandi anogona kubata 5 ~ 6 zvikamu CNC muchina.
Q2.Ndeupi chigadzirwa chinogona kushandisa kurodha uye kuburitsa robhoti?
A. Imwe neimwe robhoti inorodha inogona kuisirwa yakakodzera magumo-e-arm-tooling inoenderana nemuchina wako uye chigadzirwa.Iwo akanyanya kurongeka uye zvakare ane dexterity yekubata chikamu nehanya.
Q3.Kupera kumwe chete kwezvishandiso zvemaoko zvinogona kushandiswa kurodha uye kuburitsa robhoti?
A. Industrial robhoti ruoko anogona kushandura chirongwa uye gripper chisungiso, nokukurumidza kuchinja akangwara warehousing, debugging nokukurumidza, kubvisa kudiwa kwevashandi asiwo nguva yekudzidzira, inogona kukurumidza kuiswa mukugadzirwa.
Q4.is pane imwe merit yekutakura uye kuburitsa robhoti?
A. Kuvandudza hutano hwe workpiece Kuonekwa: robot automated mitsara yekugadzira, kubva pakudya, kuvhara, kucheka zvachose nemabhobhoti, kuderedza zvisungo zvepakati, chikamu chehutano chinovandudzwa zvikuru, kunyanya kunaka kwepamusoro.
Q5.Iwe unogona kupa mhinduro dzakakwana dzekutakura uye kurodha robot?
A. Chokwadi, tinogona kuzviita pamwe chete nemutengesi wedu.
Zvakapfuura: Imwe Axis rotator
Zvinotevera: TIG welding Robot